ပြည့်သူ့အချစ်တော် ဗိုလ်နဂါးကို အထူးစကား ပြောဆိုလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်း…a – Alanzayar
ပြည့်သူ့အချစ်တော် ဗိုလ်နဂါးကို အထူးစကား ပြောဆိုလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်း…a
ပြည့်သူ့အချစ်တော် ဗိုလ်နဂါးကို အထူးစကား ပြောဆိုလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်း
ဗိုလ်နဂါးရေ ……စိတ်ချ လေယာဉ်တွေကို “ငှက်ပစ်သလိုပစ်ဖို့ အားမွေးထားတော့” ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
ဗိုလ်နဂါးရေ ……စိတ်ချ ” လေယာဉ်တွေကို “ငှက်ပစ်သလိုပစ်ဖို့ အားမွေးထားတော့” အောင်လအန်ဆန်း ” ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သားတစ်ယောက် ” အမှန်တရားကို ချစ် ” အာဏာရှင်ကိုရွံမုန်းသူတစ်ယောက်ပဲခု ” အောင်လအန်ဆန်း ” ရဲ့ အောင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ဘောင်းဘီတွေ
လက်အိတ်တွေကို ” လေလံပစ်ပြီးနွေဦးတော်လှန်ရေးကို ” လှူတော့မှာပါလေလံကြမ်းခင်းဈေးက ပစ္စည်းတမျိုးကို ဒေါ်လာတစ်သောင်းလောလောဆယ်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးဆိုတော့ ကြမ်းခင်းဈေးတင် ဒေါ်လာနှစ်သောင်းမြန်မာငွေနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် သန်း၄၀ နီးပါးဗျ
( သိန်းလေးထောင်ပေါ့ )FN .6လို လေယာဉ်ပစ် လက်နက်က သိန်း ၄၀၀လောက်ဆိုတော့ ကြမ်းခင်းဈေးနဲ့တင် ” ငါးလက်ကောင်းကောင်းရနေပြီ ”” အောင်လအန်ဆန်း ” လို ကမ္ဘာကျော်တဦးရဲ့ လေလံပွဲ ဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ဘီလျံနာ သူဌေးတွေကလည်း အလုအယက်ဆွဲကြမှာ အသေအချာပါဘဲ
လေလံပွဲကြီးကလည်း သမိုင်းဝင်လေလံပွဲကြီးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ဦး ဒေါ်လာသန်းပေါင်း မည်မျှ့အထိလေလံဆွဲကြမလဲဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါရတဲ့ငွေအားလုံးနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ဆိုတော့ဗိုလ်နဂါး လိုချင်နေတဲ့ လေယာဉ်ပစ် လက်နက်တွေကတော့ အသေအခြာကို ရပြီပေါ့
ကြင်စိုး ငှက်စုတ်တွေ လေမှာဝဲရဲရင် ဝဲစမ်းပါစေအပို မကြွားတဲ့ဗိုလ်နဂါက ငှက်တွေပစ်သလိုဟော တကောင်ဟော တကောင်ပစ်ချနိုင်တော့မယ်တွဲလက်တွေ မဖြုတ်ကြစတမ်းဖက်ဆစ်အာဏာရှင်တွေကို အဆုံးထိဆက်တိုက်ကြမယ်
ဗိုလ်နဂါး ရေ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။ဖတ်ရှု့အားပေးကြသော ပရိသတ်ကြီး တစ်ဉီးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့် ပြည့်စုံကာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ လိုလားတောင့်တသော နေ့ရက်များ အမြန်ရောက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။crd
ပွညျ့သူ့အခဈြတျော ဗိုလျနဂါးကို အထူးစကား ပွောဆိုလိုကျတဲ့ မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ အောငျလအနျဆနျး
ဗိုလျနဂါးရေ ……စိတျခြ လယောဉျတှကေို “ငှကျပဈသလိုပဈဖို့ အားမှေးထားတော့” ဆိုတဲ့ အောငျလအနျဆနျး
ဗိုလျနဂါးရေ ……စိတျခြ ” လယောဉျတှကေို “ငှကျပဈသလိုပဈဖို့ အားမှေးထားတော့” အောငျလအနျဆနျး ” ဆိုတာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ သားတဈယောကျ ” အမှနျတရားကို ခဈြ ” အာဏာရှငျကိုရှံမုနျးသူတဈယောကျပဲခု ” အောငျလအနျဆနျး ” ရဲ့ အောငျပှဲဝငျပစ်စညျးမြားဖွဈတဲ့ဘောငျးဘီတှေ
လကျအိတျတှကေို ” လလေံပဈပွီးနှဦေးတျောလှနျရေးကို ” လှူတော့မှာပါလလေံကွမျးခငျးဈေးက ပစ်စညျးတမြိုးကို ဒျေါလာတဈသောငျးလောလောဆယျ
ပစ်စညျးနှဈမြိုးဆိုတော့ ကွမျးခငျးဈေးတငျ ဒျေါလာနှဈသောငျးမွနျမာငှနေဲ့ တှကျကွညျ့ရငျ သနျး၄၀ နီးပါးဗြ
( သိနျးလေးထောငျပေါ့ )FN .6လို လယောဉျပဈ လကျနကျက သိနျး ၄ဝဝလောကျဆိုတော့ ကွမျးခငျးဈေးနဲ့တငျ ” ငါးလကျကောငျးကောငျးရနပွေီ ”” အောငျလအနျဆနျး ” လို ကမ်ဘာကြျောတဦးရဲ့ လလေံပှဲ ဆိုတော့ ကမ်ဘာ့ဘီလြံနာ သူဌေးတှကေလညျး အလုအယကျဆှဲကွမှာ အသအေခြာပါဘဲ
လလေံပှဲကွီးကလညျး သမိုငျးဝငျလလေံပှဲကွီးအဖွဈမှတျတမျးဝငျဦး ဒျေါလာသနျးပေါငျး မညျမြှ့အထိလလေံဆှဲကွမလဲဆိုတာကလညျး စိတျဝငျစားစရာပါရတဲ့ငှအေားလုံးနှဦေးတျောလှနျရေးအတှကျ ဆိုတော့ဗိုလျနဂါး လိုခငျြနတေဲ့ လယောဉျပဈ လကျနကျတှကေတော့ အသအေခွာကို ရပွီပေါ့
ကွငျစိုး ငှကျစုတျတှေ လမှောဝဲရဲရငျ ဝဲစမျးပါစအေပို မကွှားတဲ့ဗိုလျနဂါက ငှကျတှပေဈသလိုဟော တကောငျဟော တကောငျပဈခနြိုငျတော့မယျတှဲလကျတှေ မဖွုတျကွစတမျးဖကျဆဈအာဏာရှငျတှကေို အဆုံးထိဆကျတိုကျကွမယျ
ဗိုလျနဂါး ရေ အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ။ဖတျရှု့အားပေးကွသော ပရိသတျကွီး တဈဉီးခငျြး တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးအား ကြေးဇူး အထူးတငျရှိပါသညျ။
စိတျ၏ခမျြးသာခွငျး ကိုယျ၏ကနျြးမာခွငျးတို့ဖွငျ့ ပွညျ့စုံကာ မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြား လိုလားတောငျ့တသော နရေ့ကျမြား အမွနျရောကျရှိ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။crd
Previous Article (၂၆-၁-၂၀၂၁) မှ (၁-၂-၂၀၂၁) အထိတစ်ပတ်စာ (၇)ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း……a
Next Article သုံးလနဲ့အထက် မီတာခ မပေးဆောင်ထားပါက မီတာဖြုတ်သိမ်း အရေးယူမယ်ဆိုပြီ…….z